Tsamba kuvaFiripi 4:1-23
4 Saka imi hama dzangu dzandinoda uye dzandinosuwa, mufaro wangu nekorona yangu,+ mirai munaShe makasimba+ saizvozvo, vadiwa. 2 Ndinokurudzira Yudhiya naSindike kuti vave nekufunga kwakafanana munaShe.+ 3 Ndinokukumbirawo, iwe mumwe wangu akatendeka wandinoshanda naye, kuti urambe uchibatsira vakadzi ava vakashanda nesimba pamwe chete neni nekuda kwemashoko akanaka, pamwe chete naKremendi nevamwe vese vandinoshanda navo, vane mazita ari mubhuku reupenyu.+ 4 Garai muchifara munaShe. Ndinoti zvakare, Farai!+ 5 Kunzwisisa kwenyu+ ngakuzivikanwe nevanhu vese. Ishe ari pedyo. 6 Musazvidya mwoyo nezvechinhu chero chipi zvacho,+ asi panyaya dzese zvikumbiro zvenyu ngazviziviswe Mwari muchinyengetera uye muchiteterera pamwe chete nekuonga;+ 7 uye rugare+ rwaMwari runopfuura kunzwisisa kwese ruchachengetedza mwoyo yenyu+ nepfungwa dzenyu kuburikidza naKristu Jesu. 8 Hama dzangu, regai ndipedzise nekuti, zvinhu zvese zvechokwadi, zvinhu zvese zvinokosha, zvinhu zvese zvakarurama, zvinhu zvese zvakachena, zvinhu zvese zvinodiwa, zvinhu zvese zvinotaurwa zvakanaka nezvazvo, zvinhu zvese zvakanaka, uye zvinhu zvese zvinorumbidzwa, rambai muchifungisisa* zvinhu izvi.+ 9 Rambai muchiita zvinhu zvamakadzidza uye zvamakagamuchira nezvamakanzwa nekuona ndichiita,+ uye Mwari werugare achava nemi. 10 Ndinofara kwazvo munaShe kuti iye zvino pakupedzisira matangazve kuva nehanya neni.+ Kunyange zvazvo maiva nehanya neni, maishaya mukana wekuzviratidza. 11 Handisi kutaura izvi nekuti pane zvandiri kushayiwa, nekuti ndakadzidza kugutsikana, pasinei nekuti zvinhu zvakandimirira sei.+ 12 Ndinoziva zvazvinoreva kuva nezvishoma+ kana kuva nezvakawanda. Mumamiriro ezvinhu ese zvawo ndakadzidza zvazvinoreva kuguta kana kuva nenzara, uye kuva nezvakawanda kana kushayiwa. 13 Ndine simba rekuita zvinhu zvese nekuti pane anondipa simba.+ 14 Kunyange zvakadaro, makagona pamakava neni mumatambudziko angu. 15 Ndingatoti, imi vaFiripi munozivawo kuti pamakatanga kudzidza mashoko akanaka, pandakabva kuMakedhoniya, hapana imwe ungano kunze kwenyu yakabatana neni panyaya yekupa nekugamuchira;+ 16 nekuti pandaiva kuTesaronika, imi makatumira zvinhu zvekundibatsira pane zvandaishayiwa, kwete kamwe chete asi kaviri. 17 Hakusi kuti ndiri kuda kupiwa chipo, asi kuti ndiri kuda zvibereko zvichawedzera pfuma yenyu. 18 Asi ndine zvese zvandinoda uye zvakatowanda. Zvese ndava nazvo sezvo ndakagamuchira zvamakatumira naEpafrodhito,+ kunhuhwirira kwakanaka,+ chibayiro chinogamuchirika, chinonyatsofadza Mwari. 19 Mwari wangu, uyo ane pfuma yakawanda, achakupaiwo zvese zvamunoda+ kuburikidza naKristu Jesu. 20 Saka Mwari wedu uye Baba vedu ngavakudzwe nariini nariini. Ameni. 21 Ndikwazisireiwo vatsvene vese vari pamwe naKristu Jesu. Hama dzandiinadzo dzinokukwazisai. 22 Vatsvene vese, kunyanya veimba yaKesari,+ vanokukwazisai. 23 Nyasha dzaShe Jesu Kristu ngadzishande pamafungiro enyu.
^ Kana kuti “muchifunga.”